MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ခဲတလုံးဖြင့် ငှက်နှစ်ကောင်ပစ်ချသော ကချင်စစ်ပွဲ
စစ်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတယ်.. အပစ်ခေတ်ရပ်စဲရေးတွေလဲ လုပ်နေပါသတဲ့…စာရေးသူစကားမဟုတ်ပါ ..ပိစန်တာက ပြောတာပါ။ ပိစန်တာ(Peace Center) ဆိုတာ သိလား? “ပိ” ဆိုတာ ..ပဇောက်ကို ..လုံးကြီးတင်ထားတာပါ။ ပဇောက်က သူ့ဘာသာသူနေရင်အကောင်းသား ..အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ၀လုံးကို သွားတင်လိုက်တော့ “ပိ” သွား ပြားသွားရတဲ့သဘောပါ။
ပြည်တွင်းစစ် မီး စမွှေးပြီး စစ်ပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ လက်သယ်ကဘယ်သူလဲ? အဖြေက ရှင်းရှင်းကလေးပါ…အာဏာရူးကြီးမူးကြီး သန်းရွှေတို့ ပဉ္စလက်ဆယ်ဖြာနဲ့ အရှင်ထွက်ရာအကြောင်းကလေး မတိုင်ခင် တရုတ်ပြည်ခရီးမှာ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကို ပေးခဲ့တဲ့ ဘုံးဘောလအော ဂတိတွေကြောင့် မြစ်ဆုံမှာ လောဘတောင်တွေပုံပြီး တာပိန်မှာ လူလိမ်တွေ ဂတိကို ချိုးဖေါက်လို့ ကချင်ချေသလုံးပလွေ၇ိုးတွေကို နေပြည်တော်က သွားကြားထိုးတံစစ်တပ်နဲ့ အပေါက်ဖေါက်ပြီး လေပြေမှုတ်ဖို့လုပ်ရာက စစ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုပါစို့….
ပေးကမ်းခြင်းသည် အောင်မြင်ရာတည်း ဆိုတဲ့သဘောကတော့ မရှိသူကို ရှိသူကပေးကမ်းသဒ္ဒါ စိတ်ဖြူစွာဖြင့်ဆိုလျင်တော့ မရှိသူမှာ ပေးကမ်းမှုကြောင့် ရှိသူဖြစ်ရကာ (၂)ဖက်အကျိုးဖြစ်ရသတည်းပါ။ တရုတ်ပြည်ကို ပေးကမ်းတာကတော့ မရိုးသားပါ တရုတ်ကလည်း မရှိသူမဟုတ်သမို့ မအောင်မြင်ရာတည်းသာ ဖြစ်မှာ မလွဲပါ။
ခုတော့ ခွက်ပြောက်သွားမှာ ကြောက်လို့ သူတောင်းစားတအုပ်က တောင်းခံခွက်တွေ လူသူတွေနဲ့ဝေးရာ တရုတ်ပြည်မှာ သွားဝှက်ထားကြတဲ့သဘောပါ။ သူတို့ ၀ှက်ထားတဲ့ ခွက်အမျိုးစားတွေက စုံသဗျာ…
လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးခွက်….ခွက်ပေါင်းစုံသမှ စုံလို့ပါ…ထိုခွက်များထဲတွင် ပြည်တွင်းစစ်ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ခဲ့သော ခွက်ကြီးဖြစ်သည့်မြစ်ဆုံရေကာတာခွက်ကတော့ကချင်ပြည်သားများတင်မကမြန်မာ
တပြည်လုံးဝိုင်းကန်လိုက်ကြလို့ ပိန်လိမ်သွားလေပြီ။ သို့သော် ကျော်ဖြူ ရွှေဂစ်မှာတော့ဖြင့် လှိုင်လှိုင်ဖြစ်ထွန်းစွာ ငွေရောင်မြွေကြီးတကောင်မှ တရုတ်ပြည်သို့သွယ်တန်းကာ မျိုချလိုက်လေ၏။
ခုတခါ မရိုးရပါ စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာပြန်ပြီ။ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက် ၂၀၁၃ ခုနေ့က ကချင်ဒုက္ခသယ်တွေ ခြေမကလေးတချောင်းနဲ့ လွင့်မထွက်သွားအောင် ကုတ်ထားရတဲ့ ဒုက္ခသယ်စခန်းကိုတောင် ခွေးတွေဝင်ဆွဲနေလို့ အုံ့အော်သောင်း ကသောင်းကရင်း ပြေးနေခဲ့ကြတာ မြင်ရသဗျာ…
ဘယ်ပြီးအုံးမလဲ ယက္ခတို့ရဲ့အဖေလို့ တင်စားလောက်တဲ့ အာဋာဝက ဘီလူးကြီးများက ကိုလိုနီတရုတ်ပြည်မရဲ့ရင်ခွင်ကို တိုးဝင်ဖို့ လမ်းကြောင်းလုပ်ထားတဲ့ ကျောက်ဖြူကူမင်း ရထားလမ်းက ယနေ့ ကချင်လက်နက်ကိုင်တွေ ခြေကုတ်စခန်းတွေနဲ့ ထိစပ်ဖြတ်သန်းရမှာမို့ လမ်းကြောင်း စတင်ရှင်းသည့်အနေဖြင့် တိုက်ပွဲများ စတင်လေသည်။ တရုတ်ပြည်မှ အရေးပေါ် စစ်သုံးရိက္ခာများ ပို့ပေးနေသည်။ ဒါက အချက်တခုပါ..
နောက်တခုက…ကချင်ပြည် လိုင်ဇာတွင် အောက်တိုဘာလကုန်ဝယ် ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသော တိုင်းရင်းသားများ အားလုံး တွေ့ဆုံကြမည့် ညီလာခံအား ရွေ့ဆိုင်းလိုသည် ပျက်ပြယ်လိုသည်ကို စာရေးသူအား နေပြည်တော် ကာကွယ်ရေးအရာရှိတဦးက ပြောပြသည်။ ထိုကြောင့် ခဲတလုံးနှင့် ငှက်နှစ်ကောက် ပစ်ချသည့်သဘောမျိုးဖြင့် တရုတ်ပြည်ကူမင်းမှ ကျောက်ဖြူ မီးရထားလမ်း စီမံကိန်းအတွက် မြေပုံချ လမ်းရှင်းမှုများ ဖြစ်ရသလို ဖေါ်ပြပါ လိုင်ဇာ ညီလာခံ ပျက်ပြယ်ရန်ဆိုသော ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ခုလုံးအား ယခု စစ်ပွဲတခုတည်းဖြင့် လုပ်ဆောင် ပါကြောင်း………..
ထင်မြင်ယူဆချက်များမဟုတ်ပါ သတင်းအချက်လက်များ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကျောက်ဖြူကူမင်း တရုတ်ရထားလမ်း၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အစီစဉ်များအား အသေးစိတ် တင်ပြပေးပါမည်။
at 10/24/2013 10:30:00 AM